Mr. aamusnaanta, intooda badan Cusub oo Pool Heat bamka ee Interbad 2018 - Aquark Electric Co., Ltd
Mr. aamusnaanta, intooda badan Cusub oo Pool Heat bamka ee Interbad 2018
Waxaa la joogaa waqtigii aanu marka hore in ay ka qayb Interbad ee Stuttgart, Germany. aad oo dhan ku mahadsan tahay wakhtiga aad u soo booqo qolka. Waa fursad aad u weyn in ay wadaagaan iyo dhaafsadaan fikirrada iyo waayo aragnimo ah oo ku saabsan bamka kulaylka pool inverter macaamiisha adduunka oo dhan. Waxaan nahay ugu mahadcelinayaa xiisaha ay noo gaar ah inverter design bulukeeti - Mr. aamusnaanta.
Mr. aamusnaanta waa bamka kulaylka pool ugu cusub ee bandhiga oo dhan. Waxaa la si fiican loo aqoonsan by macaamiisha ka yimid dalalka kala duwan ee show ah. Dhowr amar ayaa la xaqiijiyay inay isla goobta, taas oo uu si weyn nagu dhiirrigeliyey.
Waa maxay sababta Mr. Aamus sheyga ugu cusub?
Thanks to our samaynta warshadaha. Waa koox dareen kuwaas oo doonaya in ay abuuraan qiimaha macaamiisha iyo macaamiisha our. Simple xakamaysada xiriiri classic, beerta design dusha guri saaxiibtinimo ... faahfaahsan kasta oo u adeegta hal sabab oo kaliya: in la sameeyo waayo-aragnimo macaamiisha ugu fiican. Ka dib markii ayna si joogto ah oo isku day cusub, badeecadan ugu cusub waxaa ugu dambeyntii ku dhashay, kaas oo si guul bedeshay qufulan ee bamka kulaylka pool inverter dhaqanka.
Intaas waxaa sii dheer, waxaan si guul go'an rafiiqa barax-tiran ee Germany lagu jiro show ah. Taas macnaheedu waa ka ganacsada deegaanka iyo milkiilayaasha dukaamada pool toos ah ka iibsan kartaa Mr. aamusnaanta ee Germany! Haddii aad xiisaynayso in Mr. Aamus laakiin ma naga hor kara Interbad, ha seegin our show soo socda, Piscine Global Europe 2018 ee Lyon, France. Kaalay oo nala soo hadal fool ka fool, aad wax dheeraad ah oo ku saabsan Mr. aamusnaanta iyo qoyska inverter our baran doonaan.
Aynu wada qabsado fursad INVERTER ah, waxaad arki at waab 5D126 ee Lyon!
waqti Post: Oct-31-2018